italia Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: အီတလီ
နေအိမ် > အီတလီ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ နှင့်အချက်အပြုတ်အစဉ်အလာ - ဥရောပတစ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ၏အံ့သြဖွယ်အစည်းအဝေးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သောလူမြိုး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကွဲပြားဝိသေသလက္ခဏာရှိပါတယ်, အရာကကမ်းလှမ်းညာဘက်င်း၏သမိုင်းနှင့်အခြားအရာအားလုံးထဲသို့ဧည့်သည်များဆွဲယူ. ထိုအခါအချို့နိုင်ငံများရှိ, ကြောင်းကိုလည်းအရသာအချိုရည်ကိုဆိုလိုသည်! Those of…
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဥရောပသို့ဦးသောသူသည်ခရီးသွားများအတွက်တိုက်ကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းများလူအစုအဝေး-အခမဲ့အချို့ကိုခံစားနိုငျ, စပိန်ခြေလှမ်းများနှင့် Tivoli ဥယျာဉ်များကဲ့သို့အဓိကဆွဲဆောင်မှုအပါအဝင်. ဖေဖော်ဝါရီလတစ် breather ၏အရာတစ်ခုခုသည်: အဆိုပါအလုပ်များအားလပ်ရက်ရာသီနဲ့နွေဦးအနိုင်အထက်အကြားမွှေးအစက်အပြောက်. အကယ်.…
ရထား Travel အီတလီ, ပေါ်တူဂီရထားခရီးသွားလာ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ဘယ်အရပ်ဌာနပိုကောင်းကတီထွင်သောတိုင်းပြည်ထက်ပီဇာကိုခံစားဖို့, မှန်သော? အီတလီချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ဒီအရသာရေစာ-လှည့်-မုန့်ညက်ကိုချစ်! အီတလီမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါပီဇာအနုပညာစင်ကြယ်သောပုံစံသို့လှည့်ကြသည်, နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ယူနက်စကို-အတည်ပြုကြသည်! အီတလီနိုင်ငံန်းကျင်ရုန်းမင်း, you’ll find pizzerias opened in…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အီတလီနိုင်ငံဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်အတွင်းနေရာများ၏အမျိုးမျိုး၏သွားရောက်ဥရောပတိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်အီတလီယဉ်ကျေးမှုမှကြွလာသောအခါမြောက်ပိုင်းအီတလီတစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟော့စပေါ့ဖြစ်ပါတယ်, ခရီးသွားများအတွက်မြင်လုပ်ဖို့အဘို့ဤမျှလောက်နှင့်အတူ. ဒဏ်ငွေစပျစ်ရည်ကိုနမူနာကောရှိမရှိ…